VirtualBox ကို USB အသိအမှတ်မပြုပါဘူး 3.0 – တေလာ Lopes ツဘလော့
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါ Dell XPS မှတ်စုစာအုပ်ဝယ်ယူခဲ့သည် 15 (64 -bits), ကောင်းသောအပြောင်းအလဲနဲ့အရင်းအမြစ်များကိုအတူ, သိုလှောင်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်, Virtualization နှင့်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားခြင်းသာဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်အခုငါကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကထိရောက်မှုမရှိဘူး. အချို့အငြင်းပွားဖွယ်ရာရှိပါတယ်ပေမယ့်, အမှန်မှာ VirtualBox သည် USB အားအသိအမှတ်မပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည် 3.0, ငါ Debian ကို virtualized အခါ 7.0 ဝမ်းဗိုက်. အမှားအခြေခံအားဖြင့်စက်သည်ယခင်တောင်းဆိုမှုနှင့်အလုပ်ရှုပ်နေသည် (E_INVALIDARGS, ကိရိယာသည်ယခင်တောင်းဆိုမှုနှင့်အလုပ်ရှုပ်သည်), အောက်ပါပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း:
အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်း, ငါနှင့်အတူပွင့်လင်းထောက်ခံမှုလက်မှတ်တွေရှိပြီးသားဖြစ်ကြောင်းကိုငါသိမြင်၏ Oracle က Virtual Box တူညီသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်. အခုတော့အသုံးပြုသူနဲ့ထောက်ခံမှုအကြားမှတ်ချက်များဖလှယ်မှုကြည့်ပါ:
“USB ပံ့ပိုးမှု 3.0 ၎င်းသည်ရပ်ရွာအတွင်းအလွန်နှစ်လိုဖွယ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်. ဒီ USB ကိုကျွန်တော်အတည်ပြုလို့ရပါတယ် 3.0 VirtualBox နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ 4.1.14“.
“ဒီကိုအတည်ပြုရန်မလိုအပ်ပါ, ကျနော်တို့ပြီးသားသတိထားမိကြသည်. USB အထောက်အပံ့ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည် 3.0, ဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန်. ဒီကိစ္စကဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ပျက်မယ်ဆိုတာပြောဖို့ခက်တယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာအားထုတ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လက်ရှိဖွင့်လှစ်တစ်ခုတည်းသောသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံး ဦး စားပေးမဟုတ်ပါဘူး”.
အခြား၏မကြာသေးမီရက်စွဲအပေါ်အခြေခံသည် လက်မှတ်တွေ နှင့်မှတ်ချက်များ, ငါပြtheနာရှိနေဆဲနှင့်အနည်းဆုံးအနည်းငယ်အဘို့အသွားလျက်ရှိသည်ယုံကြည်ပါတယ် 02 (နှစ်) နှစ်ပေါင်း.
Virtualization ဆော့ဖ်ဝဲကိုပြောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ် USB ကိုလုပ်ဖို့အဆင့်လျှော့ချဖို့စဉ်းစားနေတယ် 3.0 တွင် 2.0. ရုံစံချိန်တင်သည်, အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရနိုင်သောစွပ်စွဲချက်အဖြေများကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်, သို့သော်အကျိုးမရှိ. နောက်ဆုံး, ငါ USB ကိုအသုံးပြု။ တူညီသောအခြေအနေများအောက်မှာစမ်းသပ်မှုကိုပြု၏ 2.0 အီး, ဤကိစ္စတွင်အတွက်, perfectlyုံအလုပ်လုပ်ခဲ့.
သင့်မှာအဖြေရှိရင် (သို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာ) သို့မဟုတ်သင်အတူတူပင်ပြproblemနာကြုံနေရကြသည်, သို့မဟုတ်သင်၏ VirtualBox သည် USB ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်ဆိုလျှင်ပင် 3.0 နှင့်ကူညီနိုင်မဆိုရှင်းပြချက်ရှိသည်, မှတ်ချက်ပေးရန်စဉ်းစားပါ.
– ယူအက်စ်ဘီ 3.0 host ports များကိုမထောက်ပံ့ပါဘူး
– ယူအက်စ်ဘီ 3.0 ထောက်ခံမှု – တိုးမြှင့် / တောင်းဆိုချက်ကို
စုစုပေါင်း access: 8115
16 မတ်လ 2013 တေလာ Lopes	အလုပ်ရှုပ်နေ usb 3.0, E_INVALIDARGS, ဗျာဒိတ်ကို virtual box ကို, VirtualBox usb
မူပိုင်ခွင့် © 2021 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 2.861.525 ဝင်ရောက်ခွင့်